Smashwords – Fantaro Ireo Fahavalonao Tsy Hita Maso …dia reseo izy – a book by Dag Heward-Mills
Fantaro Ireo Fahavalonao Tsy Hita Maso …dia reseo izy
Raha mandeha mamakivaky ny fiainana ianao dia hahita fa ny tontolo tsy hita maso no tontolo tena izy ary ity tontolo ara-batana ity dia mampiseho ny sasany ihany amin' ireo zavatra ao amin' ny tontolo tsy hita maso. Toy ny fanananao fahavalo hita maso ihany, dia manana fahavalo tsy hita maso ihany koa ianao. Afaka miady amin' ny fahavalo ve ianao raha tsy fantatrao izy, ireo paikadiny, ny fombany More
Raha mandeha mamakivaky ny fiainana ianao dia hahita fa ny tontolo tsy hita maso no tontolo tena izy ary ity tontolo ara-batana ity dia mampiseho ny sasany ihany amin' ireo zavatra ao amin' ny tontolo tsy hita maso. Toy ny fanananao fahavalo hita maso ihany, dia manana fahavalo tsy hita maso ihany koa ianao. Afaka miady amin' ny fahavalo ve ianao raha tsy fantatrao izy, ireo paikadiny, ny fombany sy ny fitaovam-piadiany? Ity boky ity dia fitaovana tena ilaina ho an' ny dia eo amin' ny fiainanao. Ao amin' ity boky ity dia hianaranao hoe iza ireo fahavalonao, ny fototry ny fisiany, ireo toetrany ary ny fomba fiadiana manohitra azy ireo. Hanampy anao handresy ireo fahavalonao tsy hita maso anie ity boky sarobidy ity!
Tags: maso daghewardmills books in malagasy malagasy malagache dia rese o izy fahavalonao try hita fantaro ireo